War Deg Deg Ah: Ciidamo la wareegay amniga Guryaha ay degan yihiin Mahad salaad, Faarax C/qaadir & Siyaasiyiin kale - Xigasho.net | Xigasho.net
War Deg Deg Ah: Ciidamo la wareegay amniga Guryaha ay degan yihiin Mahad salaad, Faarax C/qaadir & Siyaasiyiin kale
Warar hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in ciidamo aad u badan lagu arkayo guryaha ay magaalada Muqdisho ka degan yihiin Siyaasiyiinta Mucaaradka ku ah Dowlada Soomaaliya.
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka mid dadka ugu cad cad ee kasoo horjeeda dowlada ayaa aqalka uu ka degan yahay Muqdisho oo ku yaala agagaarka Isgoyska Soobe waxaa soo buux dhaafiyay ciidamo aad u badan oo Beesha Habar Gidir ah.
Maadaama Ciidamo gaar ah oo dowlada u xiran yihiin wadooyin ay ka mid tahay Isgoyska Soobe,waxaa buuq uu dhex maray Ciidamada u socday guriga Mahad Salaad iyo kuwa dowlada oo diiday inay gudbaan laakiin markii amar lasoo siiyay ciidamada wadada xirtay way ogolaadeen.
Sidoo kale Siyaasiyiinta Faarax Cabduqaadir, Cosoble, Labadii Xildhibaan ee Xeer ilaaliyaha uu shalay eedeyn dusha ka saaray iyo kuwa kale oo badan ayaa guryahooda waxaa lagu arkayaa ciidamo aad u badan oo aan joogi jirin,
waxaana sababta ugu weyn ay tahay in ay ilaashadaan Dukumiintiyo la sheegay in dowlada Soomaaliya ay raadineyso, iyadoo qeyb ka mid ah Dukumiintiyadaasi laga helay guriga Siyaasiga Cabdi Raxmaan Cabdi Shakuur.
Siyaasiyiintan ayaa qaarkood aanan ku sugneyd Guryahooda laakiin sababta ay ciidamada usoo direen ayaa ah inay ka hortagaan cid kasta oo dooneysa inay baaritaan ku sameyso guryahooda.